" केही विषय भए साधारणसभामा छलफल गरौं " - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
सुनील शाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एनआरएनए, अमेरिका
विज्ञ भेलाले डायस्पोरामा विशेष महत्व राख्छ
अमेरिकामा एनआरएनए आइसिसीले विज्ञ भेलाको आयोजना गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सर्वप्रथम यो विज्ञ भेला अमेरिकामा आयोजना गरेकोमा म एनआरएनए आइसिसीको नेतृत्व, पदाधिकारी एवं सम्पूर्ण कार्यसमितिमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो कार्यक्रम यहा गर्न भुमिका खेल्नुहुने एनआरएनए आइसिसीका उत्तर अमेरिका क्षेत्रीय संयोजक गौरी राज जोशी र एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशव पौडेल लगायत एनआरएनए आइसिसीका उप क्षेत्रीय संयोजक एवं यस क्षेत्रवाट आइसिसीमा विभिन्न पदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबैंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो कार्यक्रम सफल पार्नका लागि विभिन्न समितिमा रहेर योगदान गर्नुहुने सवैंप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । यो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आतिथ्यता गर्ने मौका एनआरएनए अमेरिकाले पाएको छ, यसलाई सफल पार्नु हामी सबैंको दायित्व हो भन्ने हामीले लिएका छौं । यसलाई सफल पार्न सक्रिय एनआरएनए अमेरिका सबैं साथीहरु समेत धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
विज्ञ भेलाको महत्व के छ भन्ने लाग्छ ?
विज्ञ भेलाको सन्र्दभमा कुरा गर्दा अहिले नेपालमा स्थानीय देखि संघीय सरकार बनेको छ । संविधानसभावाट बनेको संविधानमा टेकेर अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव सम्पन्न भैसकेको छ । एक अर्थमा भन्ने हो भने देश स्थायीत्वको दिशामा अगाडि बढेको छ । अव देशमा विकास र समृद्दि चाहिएको छ । त्यसका लागि सबैं तहको सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ । यो समयमा पक्कैपनि हामी एनआरएनएहरुले पनि आ–आफ्नो ठाउवाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको जुन हिसाबको प्रशासनिक संरचना देशमा तयार भएको छ । संघीयता जुन सुरु भएको छ । यो हाम्रो लागि नया अनुभव भएकाले पनि हामी वाहिर बसेकाहरुको अनुभवले यसमा सघाउ पुग्न सक्दछ । देशको ७ वटैं प्रदेशको विकास र समृद्दिमा हामीले धेर थोर योगदान गर्न सक्छौं र गर्नुपनि पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले समेत एनआरएनएसग सहकार्यको हात अघि बढाएको छ ।
यसै सन्र्दभमा सहयोग र हामी एनआरएनएको योगदान केवल आर्थिक लगानी मात्र होइन । आर्थिक लगानी पनि जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले समेत वातावरण बनाइरहेको छ । आर्थिक लगानी धेर थोर जे जस्तो भएपनि एनआरएनएहरुवाट नेपालमा भैरहेको छ । समय समयमा आवश्यकता पर्दा सहयोग समेत भैरहेको छ । आर्थिक लगानी र सहयोग बाहेक पनि हामीले अरु कुराहरु पनि दिन सक्छौं । सबैंभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आइडिया हो, यहाको आइडियालाई नेपालसग जोड्न सक्दा पनि त्यसले धेरैं अर्थ राख्छ भन्ने हो । एनआरएनएको सोंच, अनुभव, क्षमता, योग्यता, विज्ञता र अध्ययनलाई नेपालसग जोड्न सक्दा त्यसले नेपालको विकास र समृद्दिमा टेवा पुग्न सक्दछ । यसलाई बुझेर एनआरएनए आइसिसीले विज्ञ भेलाको आयोजना गरेको हो ।
नेपालीको अमेरिकामा उपस्थिति र विज्ञ भेलालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विभिन्न महादेशमा क्षेत्रीय भेला गरी तत्पश्चात विश्व विज्ञ भेला गर्ने एनआरएनए आइसिसीको कार्यक्रम रहेकाले त्यसको पहिलो कार्यक्रम यहा हुदैंछ ।
अमेरिकामा विभिन्न क्षेत्रमा नेपालीहरु सेवारत् हुनुहुन्छ । अधिकांश क्षेत्रमा अब्बल नेपाली हुनुहुन्छ । कृषि, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रविधि, उर्जा लगायत धेरैं क्षेत्रमा विज्ञ नेपाली हुनुहुन्छ । उहाहरुको विचार, अनुभव, योग्यता र क्षमतालाई एउटैं मञ्चमा ल्याउने काम विज्ञ भेलाले गरेको छ । यो भेलाले डायस्पोरामा ठूलो अर्थ राख्नेछ । अमेरिकामा कहलिएका नेपाली समेत यहा हुनुहुन्छ । उहाहरु सबैंलाई एउटै थलोमा राखेर यो कार्यक्रम हुर्दैंछ । यदि कोही उपस्थित हुन नसकेपनि उहाहरुको विचार समेटिनेछ । एनआरएनए आइसिसीको नेतृत्व र नेपाल सरकारका मन्त्री लगायतको उपस्थिति रहने यो कार्यक्रमले पुलको काम गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।
विज्ञ भेलासँगैं एनआरएनए अमेरिकाको साधारण सभा पनि हुदैंछ के छ तयारी ?
विज्ञ भेलासँगैं साधारणसभा गर्नु निकैं सुखद् पक्ष हो । एनआरएनए आइसिसीको नेतृत्व नैं रहने समयमा साधारणसभा हुनुले ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने हो । हुनत: साधारणसभा नियमित प्रक्रिया हो । तर पनि अमेरिकामा यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम एनआरएनए आइसिसीले आयोजना गरेको छ । हामी एनआरएनए अमेरिकाले आतिथ्यता गरेका छौं । यो अवसरमा साधारणसभा गर्दा धेरैं हिसावले राम्रो हुने मुल्याकंन पछि साधारणसभा गर्न लागिएको हो । साधारणसभाका लागि आयोजना हुने स्थल क्यालिफोर्निया राज्य पर्ने पश्चिम क्षेत्र की उपाध्यक्ष उमा कार्की थापाको संयोजकत्वमा साधारण सभा हुदैंछ । तयारी पुरा भएको छ, यो साधारणसभा ऐतिहासिक त होनैं सम्पन्न समेत ऐतिहासिक रुपमैं हुनेछ ।
साधारणसभा ऐतिहासिक भन्नुहुन्छ, एउटा समुहले त एक प्रकारले कार्यक्रम हुनेमा शंका जगाउने गरी प्रचार पनि त गरिरहेको छ ?
प्रचार भन्दा पनि यसलाई अफवाहको रुपमा लिनुपर्दछ । संस्थाको हित विपरित गरिने क्रियाकलापलाई सकारात्मक लिन सकिदैंन । जसले अफवाह फैलाएपनि साधारणसभा निर्धारित मितिमैं हुन्छ । मलाई लाग्छ जसले यो गरिरहनुभएको छ, त्यो सही होइन । मलाई विश्वास छ उहाहरु पनि आउनुहुनेछ र आउनुपर्दछ ।
अफवाह भन्नुहुन्छ एउटा समुहले त सार्वजनिक रुपमैं असन्तुष्टि राखेका छ त ?
समुह भन्दा पनि रविना थापा जी ले केही विषयहरु उठाउनु भएको थियो । उहा गत चुनावमा अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो । उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको थियो । त्यतिमात्र होइन उहाकैं संयोजकत्वमा यो समिति निर्वाचित भएपछि मेरिल्याण्डको बाल्टिमोरमा साधारण सभा समेत भएको थियो । यो समितिले त्यही समयमैं शपथ पनि खाएको थियो । यो बाट के भन्न खोजेको हु भने रविना जी को एनआरएनए अमेरिकामा लगानी छ । उपाध्यक्ष पदमा रहदा उहाले धेरैं गर्नुभएको छ । संस्थागत पद्दती पनि उहालाई थाहा छ । चुनावमा हार जीत जे भएपनि संस्था प्रधान विषय हो , मलाई अझ पनि विश्वास छ उहाले जे सुन्नमा आएको छ त्यसो गर्नुभएको छैन होला ।
तपाई सुनेको कुरा गर्नुहुन्छ उहावाट त मुद्दा हालिएको कुरा आएको छ ?
आधिकारिक रुपमा केही आएको छैन । थाहा पनि छैन । विश्वास छ हालिएको छैन । मुद्दा के का लागि हाल्ने ? मुद्दा हाल्न केही कारण पनि चाहिन्छ । आधार पनि त चाहिन्छ । नत्र दुखैं दिने उद्देश्य राख्ने भए जसले जहा हाले पति हुन्छ । तर यो मुद्दा मामिलाले व्यक्तिगत फाइदा पुग्ला तर संस्थालाई घाटा पुग्छ । संस्थाको इमेजमा आघात पुग्छ । जसले गरेपनि व्यक्तिगत रिस त पोखिन्छ होला तर यो संस्थामा व्यक्ति फेरिन्छन् संस्था रहन्छ, त्यसैंले प्रधान कुरा भनेकैं संस्था हो यसर्थ यो कुरा रविना जी ले बुझ्नुभएको छ, बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
रविना जी को समुहसग वार्ता गर्न समिति पनि बनेको थियो, उहाहरुले केही माग पनि राख्नुभएको थियो, तपाई छलफलमा पनि सहभागि हुनुहुन्थ्यो, आखिर किन सहमती जुटेन ?
यसमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । खाली एनआरएनए अमेरिकाको मात्रैं कुरा नहेरौं । समग्र संस्थाको तरिकाले यसमा सोचौं । संस्था भनेको व्यक्ति होइन, एउटा पद्दती हो । संस्था संचालनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । संस्था सबैंको साझा भएकाले यसलाई व्यक्तिगत चाहनासग जोडेर हेर्नुहुदैंन । आफ्ना माग सबैंले राख्न पाइन्छ । तर त्यो वस्तुपरक र वैज्ञानिक छ भन्ने पनि कुरा रहन्छ । कति विधानको अधिनमा छ भन्ने पनि हुन्छ । राखिएका मागलाई कार्यसमिति हुदैं सम्वन्धित तहमा पुऱ्याउने कुरा रहन्छ । हामी संस्थामा सबैं आउन सकुन् भनेर लचिलो भएकै हो । उहाहरुले केही विषयहरु उठाउनु भयो । एनआरएनए आइसिसीका यस क्षेत्रका संयोजक लगायतको उपस्थितिमा भएको वार्तामा उहाहरुले केही माग राख्नुभयो । हामीले सम्वन्धित तहमा पुऱ्याउने भन्यौं र उहाहरुलाई समेट्नका लागि हामी हदैंसम्मको लचक बन्यौं । तर केही यस्ता विषयहरु हुन्छन् जो विधान भन्दा वाहिर वा संस्थाको पद्दतीभन्दा वाहिर गएर निकास निकाल्न खोजिन्छ भने त्यसले सहमती जुट्दैंन ।
माग राख्ने र राखेका माग सबैं एकैपटक अहिलेनैं हुनुपर्दछ भनेर अड्डी लिदा त्यसले सही निकास दिदैंन । अर्को कुरा मैले वा अर्को कसैंले वा अध्यक्ष अथवा कार्यसमितिले मात्र चाहेर दिने विषय पनि कतिपय हुदैंनन्, त्यसका लागि साधारणसभाको निर्णय चाहिन्छ, साधारणसभाको आवश्यकता रहन्छ । त्यसैले त संस्थाको लागि साधारणसभाको महत्व रहन्छ । साधारणसभाले दिएको म्यान्डेटलाई कार्यसमितिले पालना गर्ने हो । त्यसैले म फेरि भन्छु रविना जी र उहा सग नजिक रहनुहुने साथीहरुलाई तपाईहरुका कुरा साधारणसभामा आएर राख्नुहोस् साधारणसभाले त्यसलाई स्वीकारे त्यसले झन् सबैंलाई फाइदा नै गर्छ ।
मागको कुरा गर्नुभयो, माग त पुरा गर्न सकिने खालकै थिए भन्ने सुनिन्छ नि ?
होइन, माग कति जायज नाजायज वा कति अर्थ पूर्ण भन्ने एउटा पाटो हो । तर मुख्य कुरा माग कुन तहवाट पुरा हुन्छ भन्ने हो । जुन तहवाट पुरा हुन्छ वा गर्न सकिन्छ त्यहा सम्म त त्यो विषय जान दिन पऱ्यो नि ? सवैं अहिले नैं यही वाट नैं हुन्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ । कार्यसमितिले नैं वा अध्यक्ष, पदाधिकारीहरुले नैं भनेर सबैं कुरा कसरी सम्वोधन हुन सक्छ, भोलि उहाहरुले भनेको कुरा माने पछि फेरि अन्यले यसो गर्दैनन् भन्ने छ र ? त्यसैले मुख्य विषय विधिमार्फत समाधान खोज्ने हो ।
उहाहरुको न्यायिक समिति बनाउने कुरा थियो त्यो हामीले कार्यसमितिले गर्छ भन्यौं । उहाहरुले विधान समिति, सदस्यता छानविन समिति, निर्वाचन समितिमा प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउनुभयो , हामीले यसलाई सकारात्मक लियौं, यसका लागि सहयोग गर्छौ भन्यौं तर अहिले नैं त कसरी त्यो संभव रहन्छ त्यो गर्ने भनेको साधारणसभाले हो । कार्यसमितिले गर्न सक्ने ठाउहरुमा यदि तपाईहरुको प्रतिनिधित्वको कुरा छ भने नाम पठाउन समेत भन्यौं, समुहगत रुपमा राख्ने कुरा हुदैंन, योग्यता र क्षमताले दिने ठाउमा समावेश गर्ने कुरा रहन्छ । मैले संस्थागत मात्र होइन व्यत्तिगत ढंगले पनि पहल गरे । त्यसैले हाम्रो यसमा कुनैं कमजोरी छैन, साधारणसभामा समेत विषय उठ्छ भने हामीले सबैं कुरामा छलफल गर्न तयार छौं, म फेरि पनि भन्छु सबैं आएर साधारणसभामैं छलफल गरौं ।
साधारणसभामा के के विषयमा छलफल हुदैंछ, अवको चुनावमा जादा वुथ राखेर प्रत्यक्ष मतदान जाने कुरा पनि सुनिन्छ नि ?
साधारणसभामा धेरैं विषयहरुको उठान हुन्छ । केही विषयहरु कार्य समितिले निर्धारण गर्छ भने केही विषयहरु वन्द सत्रमा उठ्छ र त्यो एजेण्डा ब्नछ । यो विषय पनि उठ्न सक्ला तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारको कुरा गर्दा अहिले वुथ राखेर मत दिने कुरा तत्काल यहा संभव छैन । हामीसँग प्रयाप्त स्रोत साधन छैन । ठाउँ ठाउँमा वुथ राख्न अवस्था धेरैं कारणले सकिदैंन । फर्जी सदस्यतालाई लिएर हामी सबैंको चिन्ता छ । बरु त्यसमा कडार्य गर्नुपर्दछ र भैरहेको पनि छ । वरु भेरिफेरिकशन पद्दतीलाई अहिले गम्भिरता पुर्वक लिनुपर्दछ । अनलाइन भोटिङलाई अझ प्रभावकारी वनाउनुपर्दछ ।
अर्को कुरा भनेको एनआरएनए अमेरिका विस्तार भैरहेको छ । धेरैं राज्यमा च्याप्टरहरु छन् । खुल्ने क्रम पनि छ । अमेरिकामा हरेका राज्यमा राज्य कानुन रहेको छ । यो अवस्थामा हामी टेनिसी राज्यमा दर्ता भएका छौं । अव हामीले विधानमा केह्ी संसोधन गरेर सवैं राज्यमा राज्यको कानुन अनुकुल काम गर्न मिल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । कप्लायन्समा जानुपर्दछ । अमेरिकामा सबैं संस्था रजिष्ट्रर हुनैपर्दछ, फाइन वन सी मा दर्ता भएका संस्थाहरुले पनि ट्याक्स फायल गर्नुपर्दछ । नन फरफिट संस्थाले ट्याक्स तिर्न नपरेपनि फायल गर्नुपर्दछ यो अवस्थामा कम्लायन्समा नजादा समस्या हुन सक्छ, यो कुरालाई मैले पहिलादेखिनैं उठाउदैं आएको हु । खासगरी समय समयमा आर्थिक सहयोग उठाउदा, नेपालमा परि आएको खण्डमा सहयोग पठाउमा यो नहुदा समस्या हुन्छ, यही पनि समस्या हुन्छ, फरक फरक राज्यमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सहयोग उठाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले कानुनीझन्झट वाट वच्न पनि यो गर्नु जरुरी छ । यो विषयमा छलफल हुन्छ ।
अर्को मैले देखेको हाम्रो विधानले सल्लाहकार राख्ने कुरा कार्यसमितिलाई दिएको छ । यसो नभई अध्यक्षले संस्था रन गर्ने भएकाले यो विषयमा अध्यक्षलाई अधिकार दिनु मुनासिव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तैं, हाम्रो सदस्यता नविकरण पनि कार्यसमितिको कार्यकालको टर्म वेसिस छ यसमा पनि सुधार गर्नुपर्दछ ।
र मैले देखेको हामीले एनआरएनएमा युवालाई जोड्ने कुरा गरिरहेका छौं । युथ कमिटि बनाएका छौं । तर युथ कमिटिले आर्थिककारणले गर्दा काम गर्न सकिरहेको हुदैंन । त्यसैले यो युथ मुमभेण्टका लागि केही सिड मनीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । यी बाहेक पनि साधारणसभामा धेरैं विषयहरुमा छलफल हुनेछ ।